သတင်းဆိုသည်မှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » သတင်းဆိုသည်မှာ
Posted by htet way on Jul 6, 2012 in Opinions & Discussion | 13 comments
သတင်းဆိုသည်မှာ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် အရပ်လေး မျက်နှာတွင် ဖြစ်ပျက်သမျှ သတင်းဖြစ်ပါသည်။သတင်းသည် မြို့တစ်မြို့ ၊ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်
အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။လူထုဆက်သွယ်ရေး တွင် သတင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်။
သတင်းသမား သည် သတင်းဖေါ်ပြချက် ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် တိကျသော၊ မှန်ကန်သော သတင်းဖြစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဘက်လိုက်မူကင်းသောစိတ်ဖြင့်
တာဝန်သိတတ်စွာ ကျိုး ကြောင်းပြ လမ်းညွှန်ခြင်း ၊ဖွင့်ဆိုရှင်းပြခြင်း စသည်တို့ကို ပြေပြစ်သော အရေး အသားဖြင့် ရေးသား တင်ပြနိုင်ရပါမည်။
သတင်းသမား သည် ကြား၇တိုင်း သတင်း မဟုတ်၊ ဘယ်မှာပင်ကြားရစေ မှန်၊မမှန် ဆင်ခြင်စဉ်းစား အတည်ပြုတတ်ရန် အရေးကြီးဆုံး ပင်ဖြစ်သည်။သတင်းကြောင့် တိုးတက်မူများ ဖြစ်နိုင်သလို သတင်းကြောင့် ပင် ဆုံးရှုံး နှစ်နာမူများ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။သတင်းတွင် အရေးကြီးဆုံး ပေါ်လွင် ထင်ရှား သိသာနိုင်သည့်အရာမှာ ဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။
တလောက သတင်းအတွက် ၀ါသနာရှင်တစ်ယောက်ကို အခန်းအနားတက်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်စေခဲ့သည်။ သတင်းရေးရန်ပု့ ထုတ်ကြည့်တော့ သတင်းဓါတ်ပုံ အဖြစ် သုံး၍မရပါဝင်သော သူ၊ ရှိသင့်သော အနေအထား ကို သေချာကျနစွာ မခွဲတတ်။ပုံပါရင်ပြီးရော ရိုက်လာခဲ့သည်။
ယခုခောတ်သည် သတင်းခောတ်ဖြစ်သည်။ သတင်းကို လူတိုင်း စိတ်ဝင်စား ကြသည်။မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဆေးရုံတွင် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်၍ ဆရာဝန်မကြီးက ရဲစခန်း
တွင် မိတ်ဆွေအား အမူဖွင့်သည်။ ရဲမူခင်းဂျာနယ် တစ်ခုတွင် သတင်းပါလာသည်။ သတင်းက မတိကျ ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ တရားစွဲခံရတာ ဘယ်သူလည်း သေချာမသိရ
ရေးသားမူက မရှင်းလင်း ။ သတင်းသမားက သေချာအောင် မရေးတာဘဲဖြစ်မည်။
နောက်တစ်ခုက မြို့တစ်မြို့ရဲ့ ကျေးရွာ တစ်ရွာတွင် အလှူမှာ ကြွေးတာ စားပြီး ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်ကြသည်။ သတင်းတွေ ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရသည်။ဖြစ်ပျက်မူကို အမှန် မသိရ ၊ရေးသားချက်များ က တကယ့်ဖြစ်ရပ်နှင့်ကွာဟနေသည်။ အစာ အဆိပ်သင့်သည်ဟု ရေးထားသည်။ ထိုမြို့နယ်က ကျန်းမာရေး ဦးစီးဋ္ဌာန သာမက ပုဂ္ဂလိက အခမဲ့ဆေးခန်း လည်း သွားရောက်ကုသည်။ မြို့နယ်က တာဝန်ရှိသူတွေလည်း အချိန်နှင့် တပြေးညီ သွားရောက်ခဲ့တာ မြင်ရသည်။ သို့သော် သတင်းမှာ မပါ။ခက်ပေစွ။
သတင်းသမားသည် ဖြစ်ပေါ်မူ အခြေအနေတွင် ဘယ်သူပါလဲ (who)ဘာဖြစ်တာလဲ (what)ဘယ်အချိန်လဲ( when)ဘယ်နေရာ( where) ဘာကြောင့်(why)
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ(how)စသော“ ဘ”ခြောက်လုံး ကို အရင်လေ့လာပြီးမှ ဘယ်လိုရေးသား တင်ပြရမလဲ တွေးခေါ်စဉ်းစား ရေးသား တင်ပြရပေမည်။ ကိုယ်ရေးသားမူကြောင့် အကျိုး ဆက် ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုသည်ကို လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန် လို အပ်ပါသည်။
သတင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း ဆင်းတစ်ယောက်က သတင်းသိုးတယ် ဆိုတာ ဘာလဲဟု ကျွန်တော့်ကို မေးတာ ခံရသည်။ကျွန်တော်က မသိပါဟုသာ စကားနည်း၇န်စဲ ဖြေလိုက်ရသည်။ သတင်းသိုး တယ်ဆိုတာ ၇ရက် ထက် လွန်သော သတင်းဟု ပြန်လည်ပြောပြ ၍ မှတ်သားလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်နားလည်သော ၊သိသော သတင်းသိုးသည် ဆိုသည်မှာ “ဟောင်းနွမ်းရိုးအီ နေသော သတင်း ”၊ လူတကာသိပြီးသော အကြောင်း အရာ ပါပြီးသား သတင်းတွေကို နောက်ထပ် ထပ်ရေးသော သတင်းကို “သတင်းသိုး” ဟုသာကျွန်တော်သိထားပါသည်။
သတင်းသမားတစ်ယောက်သည် သတင်းကို စေတနာရှေ့ထားပြီးရေးရသလို သတင်းဆိုင်ရာဥပဒေများလည်း သိထား ရန် လိုအပ်ပါသည်။သေသူဓါတ်ပုံ ကိုဖေါ်ပြသင့်မသင့်၊
ကလေးသူငယ် ဓါတ်ပုံကိုဖေါ်ပြသင့်မသင့် သိရှိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပဒေက ခွင့်မပြုသောကိစ္စများကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရမည်။ အသရေကို နစ်နာစေသော စကားရပ်များ ၊သရော်ချက်များ ကို လည်း ရေးသားမူတွင် သတိရှိ ရမည်။ ပုဒ်မ၅၀၀ ကိုနားလည်ထားရမည် ။ ကင်းလွတ်ခွင့် (၁၀)ချက်ကိုလည်း သိထားရပေမည်။
အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်များတွင် ကိုယ်ပျောက်မင်းသားများက သတင်းတွေရေးကြသည်။တဖက်နှင့်တဖက် တိုက်ခိုက်ကြသည်။၎င်းတို့သည် လူမသိနိုင်သော ကလောင်ဖြင့် ရဲရဲကြီး တိုက်ခိုက်ကြရာ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ကို ဂရုမစိုက် နိုင်တော့ ။
သတင်းသမားသည် ကိုယ်နှင့်မတူ ကိုယ့်ရန်သူဟူသော အစွန်းရောက်သည့်နိမ့်ပါးသည့်စိတ် မထာရပေ။သတင်းသမားသည် စိတ်ဖြူရမည်။ တည်ငြိမ်ရမည် သတိရှိရှိနေရမည်
ကိုယ့်မြို့နယ်ရှိ သတင်း တစ်ပုဒ်ကို ဂျာနယ်တွင်ဖေါ်ပြ ခံရသည်ကိုတွေ့သူ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လာပြသည်။ဓါတ်ပုံက အုတ်ဖိုပုံရိုက်ထားသည်။သတင်း အဆုံး၌
မြို့နေလူထုက ဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန် အထူးလိုလားနေပါသည် ဆိုတာ ရေးထားသည်။ ထူးဆန်းတာက မြို့ က သတင်းထောက်မဟုတ်။ဒါသည် သတင်း မစစ်လို့ ဆိုချင်
ပါသည်။တိုင်စာဆန်သော သတင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မေ၇းရတော့ မဟုတ်။ပြည်သူအကျိုးရှိမည် ဆိုလျှင်ရေးနိုင်ပါသည်။သို့သော် စစ်မှန်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တော့ရေးသားရမည်။
စေသည့် စွတ်စွဲချက် ဖြစ်ခြင်း ၊တရားရုံးမူခင်းများတွင် တရားရုံးက မဆုံးဖြတ်ခင် ရေးသားခြင်း များ ကို ရှောင်ရှား၍ အပြစ်ကင်းသော ။ အကျိုးရှိသော သတင်းများဖြင့် လောက
ကိုအလှဆင်နိုင် အကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေဟု စေတနာဖြင့် ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ပုဒ်မလေးတွေ သိခွင့်ရပါတယ် ပြီးတော့တကယ်တော့သတင်းမှန်ကန်မှုကအရေးကြီးပါတယ် သတင်းမှားသိတဲ့သူနဲ့သတင်းမှန်သိတဲ့သူကတကယ့်ကိုအကွာကြီးဘဲ သတင်းမှန်သိတော့ သူပြောတဲ့စကားကအမှန်တော့သူပြောတာ အမှန်ဘဲပြောတက်တယ် သတင်းမှားပြောတဲ့သူကျတော့ သူကတော့ အမြဲသတင်းမှားတွေဘဲ ပြောတက်တယ် သူပြောတဲ့သတင်းဆိုတော်ပါတော့အေ အဲ့လိုတောင်ဖြစ်ကုန် ရော သတင်းတိကျမှု ဖတ်ရတာလည်းစနိုးတကယ်နှစ်သက်တယ် သတင်းမှန်နဲ့တိကျတဲ့သတင်းကိုဘဲမျှော်လင့်တယ်။။။
ဆြာထက်ရေ သတင်းအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သိလိုက်ရပါတယ် ။
သတင်းသမားတွေ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ “အသရေဖျက်မှု” ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလဲ ရေးတင်ပေးပါဦးနော။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အားပေးတာကျေးဇူးပါ
ပုဒ်မ ၅၀၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်ရေးပါ့မယ် ဆရာ။
ပုဒ်မ၃၇၆ပါရေး… ၃၇၇ဆိုရင်တော့ ဘပုတို့အကြိုက်ပေါ့..။
တလောလေးကဘဲ 7Days က သံတွဲခရိုင် လဝကမှူးနာမည်ကို မြို့ နယ်မှူး
နာမည်နဲ့ မှားရေးတာ၊ဂျိတ္တောရွာက မီးပြတိုက်ကို ဝိုင်ဖိုင်တိုင်ပါဆိုပြီး ထည့်
ရေးတာ။အင်း. အမှားတွေကမနည်းဘူး ဆရာထက်ရေ။တစ်ချို့ အမှားက
သတင်းဆိုတာ အနဲဆုံးတော့ မှန် ဘို့လိုပါတယ် ကိုထက်ဝေးရေ..။
သတင်း ဆိုတာကို ကိုယ်လိုရာဆွဲသုံးဖို့ရည်ရွယ်ပြီး-
သတင်းကို ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သလို ဇောင်းပေးဖန်တီး တာတွေ အလွန်များလာပါတယ်။
သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထိုက်စရာ သတိထားစရာတွေညွှန်ပြထားတဲ့
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ကြိုဆိုပါတယ် ဆရာထက်ရေ…။
ပြည်သူကို သတင်းမှန်နှင့် အချိန်မီ
တင်ပြသော သတင်းသမားများ လိုအပ်ပါသည်။
သိထား လိုက်နာသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်
ဖေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းသတင်းဆိုတာ အစပြုရာကနေဆီလိုအပေါက်ရှာပြီး လူထုဆီရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတင်းသမားလို့ခေါ်တဲ့ သတင်းထောက်၊သတင်းပြု၊ စာတည်း နဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးပါပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကို လူထုဆီရောက်အောင်ပို့ဘို့ တာဝန်ရှိကြတဲ့ ဖေါ်ပြပါအဆင့်ဆင့်သောပုဂ္ဂိုလ်များက အဲ့ဒီသတင်းဟာ လူထုနဲ့သင်တော်သလား၊အကျိုးရှိသလား၊ လူနေမှုစနစ်နဲ့ခေတ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိလားဆိုတာ ချင့်ချိန်ဝေဖန် တန်ဘိုးဖြတ်ပြီးသတင်းအဖြစ်ဖေါ်ပြနိုင်မှုဟာ သတင်းသမားတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းပြီး အမြတ်အကျိုးကိုသာ ဦးစားပေးရင်အဲ့ဒီသတင်းဟာ သက်ဆိုးမရှည်ပါဘူး။ (အစိုးရကအရေးယူခံရလို့လက်ဆိုးမရှည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။) လူထုက တဖြေးဖြေးနဲ့ အဲ့ဒီသတင်းသမားရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုမြင်လာကြလို့ပါ။
သတင်းက အတင်းမဖြစ်အောင်ရေးတတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း….
ဒါကြောင့်လည်း အွန်လိုင်းမီဒီယာ လောဆိုပြီး ဥပဒေထုတ်ဖို့ လွှတ်တော်ကို တင်ပြကြတာပေါ့။ အပြင်မှာ ရေးသားတဲ့သတင်းတွေက ရေးတဲ့သူ တာဝန်ယူလို့ ရပေမယ့် အွန်လိုင်းက သတင်းတွေကျတော့ မှန်ကန်တာကော မမှန်တာကော စုံနေတော့ ဘယ်သူတွေ တာဝန်ယူကြမလဲဆိုတဲ့အရေး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပေါ့။ အွန်လိုင်းမီဒီယာလောသာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် သတင်းမှန်တွေ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ မနောတော့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ရှင်။
တင်ပြချက်ကို ..သဘောကျပါတယ်ခင်ည ။
သိသင့် သိထိုက်ပါတယ် ။ သိပြီးသူများ..သတိရ..။ မသိသေးသူများ..သိရ…လို့ ကျေးဇူးပါခင်ည ။
မြင်တွေ့နေရသော သတင်းတွေအပေါ် ရေးမိခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း
တစ်ချို့လည်း သတင်းဆိုတာ မသိပဲ သတင်းတွေရေးနေ ၊ရေးချင်သူတွေအတွက်ပါ ဆရာ့ ဆရာကြီး
များ အတွက်တော့ မဟုတ်ပါ ခင်ဗျား။